Zvirongwa zvezororo zveAmerica zvakakanganiswa neCOVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa US News » Zvirongwa zvezororo zveAmerica zvakakanganiswa neCOVID-19
Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Culinary • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mhedzisiro yeongororo yakaitwa ichangopfuura ye500 maAmerican kuti vaone kuti marongero avo ezororo akanganiswa sei Covid-19, vaziviswa nhasi.
Ongororo iyi yakaunganidzawo ruzivo nezve tsika dzevatengi nekushandisa mari pamusoro penjodzi iyi.
Iwo ekuongororwa kweongororo anoratidza maitiro ekugamuchira vaeni uye maindasitiri ezviitiko anogona kusimudzira zvipo zvavo kuitira zvinofarirwa nevatengi.
Vanhu vanowanzo gara kumba kuzororo ravo rekudya uye ivo havasi kuchinja izvo gore rino, kunze kwekunge vangave vaine kuungana kudiki kana kusarudza mhemberero chaiyo. Kune avo vari kuitisa mukati-munhu kuungana ino mwaka wezororo, ruzhinji rwavo ruchave uine 6-10 vashanyi. Kune maresitorendi, izvi zvinoreva kuti vanogona kukanda kune zvidiki zvidimbu zvemazana ekuti vaende kuzororo chikafu, kana kupa a-la-carte sarudzo.
Takabvunza vakapindura kana vaive vaunganidza musangano pamwe nevashanu kana kupfuura vaivapo. Chishoma pasi pehafu yevakabvunzwa vakati hongu, uye yeavo makumi matatu% avo vakashandisa kugadzirira zviitiko izvi. Kana vasina kushandisa chikafu, zvikonzero zvavo zvikuru zvaive zvekuti zvaidhura, vaibika ivo chikafu kana kuti vaiona sekuti chikafu hachina kuchengeteka. Kuitira kusundira chikafu chenguva ino yezororo, maresitorendi anogona kupa zvinokurudzirwa nemitengo kuitira kukwezva vatengi vazhinji, kupa a-la-carte sarudzo dzekudya zororo, uye kuburitsa zvimwe zvekushambadzira zvichiratidza matanho ehutsanana pavanogadzirira chikafu kurerutsa zvinonetsa zvevatengi. .
Vanopfuura hafu yevakabvunzwa vari kutenga makadhi echipo kumaresitorendi mwaka wezororo. Kana zvichikwanisika, maresitorendi nenzvimbo dzezviitiko dzinofanirwa kumisikidza online kadhi kadhi system kuita kuti kutengeserana kuve nyore uye nyore kune vatengi.
Vanopfuura hafu yevakapindura vakapindura kwete pavakabvunzwa kana pabasa / kambani yavo iri kubata mhemberero yezororo; zvisinei hazvireve kuti hazviitike pakupedzisira. Maresitorendi nenzvimbo dzezviitiko dzinogona kupa vatengi zvinokurudzira kuti vafumise mapato epashure-ezororo mumwedzi yechirimo ya2021.